Ya bụ nnukwu mmemme bụ nke weere ọnọdụ n'obi nwa amadi ahụ dị n'obodo Amichi n'okpuru ọchịchị 'Nnewi South' nke steeti Anambra.
N'okwu ya dịka ọ na-awa ọjị na mmemme ahụ, Chiifu Maja Umeh, bụkwa onye a maara n'ụwa gbaa gburugburu dịka Ọkwụaka Amichi kelere Chukwu abiama maka onyinye ndụ nakwa otu o siri duru ndị siri ebe dị iche iche bịa isonye na ya bụ mmemme wee bịarute n'udo na ọñụ, ma kpọkukwazie ya ka weghara ọnọdụ, ọ bụnadị dịka o gọrọ ọfọ udo, ahụike, ogologo ndụ na ọganihu nye ndị niile bịara isonye na ya bụ ọgbakọ. Ọ gara n'ihu kọwaa oke mmemme ahụ dịka omenahọ, ma bụrụkwa nke o kwuru na ọ na-ewere ọnọdụ ma ọ gachaa mkpụrụ ụbọchị isii obodo Amichi zuru ezù jiri mee mmemme ịwa ji ọhụụ ha, kwa ahọ ọbụla.
Dịka e kwuru na ọ na-abụ dike kpọọ, dike aza, oke memme ahụ bụ nke dọtara ọtụtụ ndị e ji okwu ha agba izu na ndị selitere isi na ngalaba dị iche iche nke steeti Anambra nakwa ala Nigeria n'izugbe, bụ ndị bịara n'uju isonyere ya bụ agụ nwoke n'ịñụrị ọñụ ya. Ụfọdụ n'ime ndị ahụ sonyere na mmemme ahụ gụnyere aka na-achị steeti Anambra, bụ gọvanọ Willie Obianọ, nke onye nọchitere anya ya bụ onye enyemaka pụrụ iche nye ya n'ihe gbasaara echichi ọdịnala, ndị ndu obodo na ọchịchị ime-ime obodo, bụ ọkaiwu Vera Okonkwọ; osote aka na-achị steeti Anambra, bụ dọkịta Nkem Okeke; Oriakụ Bianca Ojukwu; Dọkịta Ifeanyị Ụbah; kọmishọna steeti ahụ na-ahụ maka ndị ntotobịa na nkwalite ọrụ aka, bụ maazị Bonavrture Enemalị, nwa amadi ahụ ji aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APGA apụta ịzọ ọkwa sineeti n'okpuru ọchịchị "Anambra South", bụ Maazị Ikenna Mbazulike; ògbò ya nke jikwa aha otu ndọrọ ndọrọ ahụ ahụ apụta ịzọ ọkwa nnọchi anya ọgbọ nta nkwàdo Nnewi South nke abụọ n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti Anambra; onyeisi ụlọ mbipụta akwụkwọ akụkọ National Light, bụ maazị Chuka Nnabụife; ogbo ya nke ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service, bụ Nzeh Uche Nwọrah, onyeisi ọchịchị obodo Ụkpọr, bụ Chiifu Emmanuel Nwachukwu (Ọnọdugo), tinyere imirikiti ndị ọzọ.
Ihe pụtaarịchara ihè na mmemme ahụ, gụnyere ịwa ji kpọnkwem, bụ nke e mere site n'aka Chiifu Maja Umeh, ịwa achịcha bekee, ịgba egwu ọdịnala dị iche iche, tinyere ịnabata ụmụafọ obodo ahụ, bụ ndị akpọlitere n'ọkwa dị iche iche n'ọchịchị nọ ugbu a na steeti ahụ.